Yaa Ka Masuul Ah Dayaca Saraakiisha Ciidanka Booliska Somaliland! W/Q Siciid Maxamuud Gahayr | Oodweynenews.com , Oodweyne News, OODWEYNENEWS
August 30, 2017 | Published by: goobjoog
22kii March 2012ka ayuu Marxuun Maxamed Saqadhi Dubad ku geeriyooday cusbitaal ku yaalla magaalada Dubaay ee dalka Isu-tagga Imaaraadka Carabta. Walaw ay qoyskiisu doorbideen in lagu aaso carri shisheeye, waxa niyad-jabka keenay oo Taliyaha dayacay qarankii iyo xukuumaddii uu masuuliyadda u hayay. Madaxweyne Siilaanyo oo xanuunkiisa ka gaabsaday ayaa geeridiisa kaddib yidhi “Waxa uu ahaa geesi nagu banneenay kaalin adag”.
“Docdi Saqadhi naga awdi jiray, waw darsanaynnaaye”
Mid ka mid ah ehelkiisa oo ka warrama siduu wax u noqday, sida loo hagraday iyo xaaladda la deristay ayaa yidhi “Waxa uu dhaawacmay iyada oo ay ciidanka boolisku qabanayaan dad khamri soo gelinaya Burco oo shacab ah. Ninkii waxyeellada geystayna lama qabannin. Rasaastu waxa ay kaga dhacday laf-dhabarta, sarkaalkani waxa uu muddo yaallay Burco. Waxa loo soo gudbiyay Hargeysa, ugu dambayntiina waxa loo duuliyay Hindiya. Waxa ku baxay qarash dhan $46,000, kaas oo ah qaadhaan ay sokeeyuhu ururiyeen. Walaw ay xukuumaddu ballan-qaadday in ay bixinayso $10,000, illaa hadda waxba ma ay bixin.
Saddex dhakhtar oo Hindiya ahi waxa ay yidhaahdeen “Waxa aanu filaynnaa in ay jirto fursad 30% ah oo uu ku samata-bixi karo. Miyaanu qalliin samaynnaa annaga oo idiin haynna rejadaas kooban?”. Xigaalku waxa ay doorbideen in loo soo saaro dal-ku-gal Jarmalka ah si halkaas xaaladdiisa loogula tacaalo”